६० लाख नागरिकका लागि भारतसँग खोप किन्न पहल « Naya Page
भारतमा आगामी शनिबारबाट खोप लगाउन सुरु, तर कोभ्याक्सिनको प्रभावकारिताबारे भारतमै प्रश्न
काठमाडौं, २६ पुस । कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने खोप आउनुभन्दा पहिला नै सरकारले २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख नागरिकलाई पुग्ने गरी कोरोनाविरुद्धको खोप किन्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले भारतसँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको छ ।
कोभ्याक्सको खोप सन् २०२१ को पहिलो चौमासिकपछि मात्रै आउने जानकारी पाएकाले त्यसअघि नै खोप किनेर जनतालाई लगाउने योजना बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए । कोभ्याक्स सुविधाबाट पनि २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने खोप आउँछ ।
दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यले तीन सातादेखि खोप खरिदका लागि यी दुई कम्पनीका अधिकारीसँग छलफल गर्दै आएका छन् । आचार्यले दुई साताअघि सेरमका अतिरिक्त निर्देशक प्रकाश सिंहसँग नेपाली दूतावासमै छलफल गरेका थिए । त्यस्तै, शुक्रबार सेरमका महाप्रबन्धक प्रसेन आध्यासँग पनि खोप खरिदबारे छलफल गरेका छन् । राजदूत आचार्यले २२ पुसमा भारत बायोटेकका कार्यकारी निर्देशक डा. भी कृष्णमोहन र उनको टिमसँग छलफल गरेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । छलफलमा दुवै कम्पनीले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने सहमति जनाएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले खोप उपलब्ध गराउन भारतीय समकक्षी डा. एस जयशंकर र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई चिठी लेखेका थिए । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार खोपका लागि दूतावासका तर्फबाट भारतको नीति आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ । भारत सरकारको सहजीकरणमा निजी कम्पनीहरूबाट खोप खरिद गर्ने सरकारको योजना छ । तर, भारतबाटै खोप खरिद गर्ने निर्णय भने भइसकेको छैन ।
‘नेपालमा नियमित खोप भण्डारण गर्ने क्षमतामै भारतीय कम्पनीका खोप पनि भण्डारण गर्न सकिन्छ । त्यसैले सेरम इन्स्टिच्युट इन्डिया र भारत बायोटेक कम्पनीले बनाएको खोपको भण्डारण नेपालमा पनि सहज छ,’ कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज डा. उप्रेतीले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पनि दुईदेखि आठ डिग्री सेन्टिग्रेटमा भण्डारण गर्न मिल्ने खोपलाई खरिद गर्न प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
डा. उप्रेतीका अनुसार अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूसँग पनि सीधै छलफल गरिरहेको छ । ‘मन्त्रालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई तिमीले उत्पादन गरेको खोप कति संख्यामा कुन मूल्यमा दिन सक्छौ भनेर जानकारी समेत मागेको छ,’ उनले भने ।
संयोजक डा. उप्रेतीले बताएअनुसार खोप ल्याउने पहिलो प्रयास जिटुजीमार्फत नै हो । यदि जिटुजीमार्फत खोप ल्याउन सम्भव नभए सरकारले खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग सीधै किन्नेछ । तर, त्यस प्रक्रियाबाट पनि सम्भव नभएको खण्डमा नियमित खरिदको प्रक्रियामा जाने बताइएको छ ।